Usulelo lweHawaii COVID-19: Ingxelo enye ePhakamileyo emva kwenye
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Usulelo lweHawaii COVID-19: Ingxelo enye ePhakamileyo emva kwenye
Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
IHawaii COVID-19 yosulelo olwenziweyo
Ukhenketho lwaseHawaii luyanda, kwaye kunjalo ke ne-COVID-19 phakathi kwabangagonywanga njengangaphambili. Ngosulelo olutsha lwe-coronavirus engama-243, i Aloha Umbuso usengxakini enkulu.
Amatyala amatsha e-COVID-19 eHawaii ayenyuka kwaye ebekhwela yonke imihla ngaphezulu kweveki.
Inqaku lepesenti yabantu abagonyelweyo ngoku kurhulumente, iHawaii ibona ukosuleleka okutsha okuphindwe kabini kunosuku olurekhodiweyo ukusukela kubhubhane.
Ngokunyuka okunje kwamatyala amatsha, umntu unokucinga ukuba lixesha lokuba abuyisele igunya lokuhamba, kodwa ukuza kuthi ga ngoku urhulumente akatshintshanga nto.
Ukunciphisa abo bagonywe ngoku kurhulumente (iipesenti ezingama-60), usulelo olungama-243 luya kuphumela ngaphandle luthetha ukuba lusondele kufutshane nosulelo olungu-700 ngokusekwe kumanani alo nyaka uphelileyo ngaphambi kokuba kugonywe.
Olona suku lubi ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhane ibingu-Agasti 27, 2020, enamatyala amatsha emihla ngemihla angama-371. Kodwa ngokusekwe ekufumaniseni abo bagonyiweyo, namhlanje ibilelona nyuko liphezulu lakha labhalwa kusulelo olutsha, kwaye iinkokheli zokhenketho zithi cwaka.
Iihotele, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zigcwele. Akukho sithuba seelwandle zidumileyo, ezinje ngeWaikiki Beach, ukufumana indawo yetawuli yakho.
Akukho bangeneli bamazwe aphesheya, kodwa abafikayo basekhaya babhalisile abafikayo ngakumbi kunaphambi kobhubhane.
Amanqanaba osulelo lwe-coronavirus eHawaii afikelele kumanani aphindwe kathathu kwiintsuku ezisi-8 zokugqibela kwaye anyuka yonke imihla.
Amatyala amatsha ali-146 abhaliswa kwi-Honolulu County, ama-50 kwiHawaii County, ali-14 eMaui County, nase-8 eKauai County.
Phantse iipesenti ezingama-78 zamatyala ngoJulayi avela ekusasazeni koluntu, iipesenti ezingama-20 zabahlali bebuya ekuhambeni, kunye neepesenti ezi-2 kohambo olungelolwabahlali.
Ukurekhodwa kokufika kwezokhenketho kunokuba neepesenti ezi-2 kuphela, eziziindaba ezimnandi kuqoqosho, kodwa ngokwanda kwamanani, inokuba lixesha lokubuyela umva kuthintelo.
Ixesha lokugqibela iHawaii ibiphantsi kokutshixwa ngokupheleleyo kwenani lamatyala amatsha abonwayo. Namhlanje akukho lizwi lithethwayo ngamagosa aseburhulumenteni.
Ukusukela nge-8 kaJulayi, i-2021, iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo akusafuneki ukuba zixhalabe malunga nokubonelela ngovavanyo lwe-PCR olubi ukunqanda ukuvalelwa iintsuku ezili-10, kwaye nangaphezulu kwama-30,000 abafikayo ngosuku, olu tshintsho kuthintelo lohambo lubonisa.
Kukho iindwendwe ezininzi eHawaii ngoku xa kuthelekiswa no-2019. Ukuba uthatha uhambo okanye uyehla usiya eKalakaua Avenue eWaikiki, ngabantu abayi-5% kuphela abanxibe iimaski. Nangona kunjalo, ngamanani aphezulu amatyala amatsha, akukho nokuba abe mnye kwi-Rhuluneli ukuyalela imaski enxibe kwakhona.
IHawaii ilandela umkhwa e-United States wokuba abantu bondliwe kwaye bomelele ngengqondo. Abasakhathalelanga ukufihla, inokuba yeyona nto inokuthintela i-COVID-19 ngaphandle kokugonywa ngokupheleleyo. Le yingqondo eyingozi kunye nophuhliso olunobungozi.